Riandranon'i Git-Git, Bali, Indonezia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Git Git Falls, Bali, Indonezia
Randranon'i Git-Git (Randranon'i GitGit)
Git Git no riandrano malaza indrindra amin'ny riandrano Bali rehetra. Ny anarany dia avy amin'ny tanàna akaiky sy renirano mitovy anarana aminy. Raha ny tena izy, Git-Git dia riandrano misaraka vitsivitsy izay mifanakaiky. Hita eo akaikin'izy ireo ny ala sy ny fambolena.
Ny tanàna Git Git dia misy 10 km miala amin'i Singaraja ary 70 km miala an'i Denpasar, any amin'ny faritanin'i Sukasada. Misy renirano mikoriana eto, izay antsoina koa hoe Git-Git, ary mahatonga ny andian-drano izany. Misy lalana mirefy 300 m ambonin'ny haavon'ny ranomasina.
Riandrano maro no hita amin'ny haavo samy hafa eo amin'ny farafaran'ny riaka voalaza etsy ambony. Eo anelanelan'ny riandrano roa mahery - manodidina ny 1 km. Izy ireo dia mifandray amin'ny alàlan'ny lalana sy tetezana mamakivaky ny ala. Soa ihany fa tsara ny toetoetran'ireny lalana sy tetezana ireny satria malaza amin'ny mpizahatany ity toerana ity.
Ny rafitra dia ahitana riandrano 4:
Kambana kambana Git, Git.
Ny riandrano lehibe.
Any amin'ny avaratry Bali no misy an'io riandrano io. Afaka tratran'ny fiara manofa trano na scooter izy ireo. Raha tonga avy any atsimon'ny nosy ianao dia mila mamily an'i Denpasar. Ny halavan'ny lalana miala amin'ity tanàna ity dia manodidina ny 70 km, ary eo ho eo dia mitana 2 ora eo ho eo.
Vidiny fidirana - 5 000 ropia. Misy fidirana 2 isan-karazany mankany amin'ny riandrano ambany sy ambony. Ny fijanonana maimaimpoana dia misy eo akaikin'izy ireo, na dia tsy tena tsara aza ny toe-pahasalamany. Eo akaikin'ny parking ihany koa dia misy trano fisakafoanana kely sy fivarotana mivarotra zava-manitra, kafe ary voankazo, izay angonina eo akaikin'ny riandrano.
adiresy: Rindrambaiko Gitgit 81113, Singaraja, Bali, Indonezia
Tapakila fidirana - 5 000 ropia
Fijanonana fiara na bisikileta - maimaim-poana
Teo akaiky eo dia misy trano fisakafoanana kely sy fivarotana enta miaraka amin'ny voankazo, zava-manitra ary kafe
Sabotsy - 7.00-18.00
Alahady - 7.00-18.00
Sarin'ny riandrano Git-Git
Git Gitit (GitGit)
Randranon'i Git Git (Git Git)
riandrano Git-Git eo amin'ny sari-tany
Ny sarintany hitanao etsy ambany dia feno an-tsehatra. Azonao atao ny mikaroka ireo teny fototra toy ny "beach" na "diving", "waterfall" ary ny hafa. Ho valiny, ilay sarintany dia hampiseho ireo marika ireo sokajy mahaliana anao.